Ziyakhala iziboshwa ezishiselwe impahla e-Sevontein | News24
Ziyakhala iziboshwa ezishiselwe impahla e-Sevontein
Uhlu lokudla iziboshwa ebezivumeleke ukuphathelwa izihlobo zazo. PHOTO:supplied
AZENEME iziboshwa zasejele i-Sevontein e-Elandskop ezikhala ngokuthi zishiselwe impahla ebeziyinikwe izihlobo zazo ngeviki eledlule kade kunosuku lwemindeni olwaziwa nge-Family Day ngaphakathi ejele oluhlelwa minyaka yonke.
Ngokusho kwesinye isiboshwa esingaphakathi esilume leliphephandaba indlebe ngaloludaba sithe ngoLwesine noLwesihlanu olwedlule bekunomcimbi wokuba bachithe isikhathi nemindeni yabo ukuze ibone ukuthi izinhlelo zokuhlumeleliswa kwabo izimilo zihamba kanjani.
“Isikhathi esiningi uma kunalomcimbi njengeziboshwa kunohlu lwezimpahla esiyaye sizicele ezihlobeni zethu ngokuvumelana nabaphathi bejele. Lesi isivumelwano esidala esiba naso nejele akuyona into ebiqala ukwenzeka kulonyaka.”
Uthe ngaphandle kohlu lokudla abagunyazwe ukuthi imindeni ingabaphathela kona bayaye bengeze nezinye izinto abazidingayo njengokokugcoba emzimbeni, amashidi kanye nezinto ezisebenza ngogesi njengamaketele nokunye.
“Kulokhu kwenzeke into ebesingayilindele, sithe uma sesibuyela emaselini ethu nezinye zezinto kwafika ojele bazishaqa zonke bahamba bayozishisa. Okusiphatha kabi ukuthi sivumelekile ukuthi sibe nayo lempahla ngakho besingekho isidingo sokuthi ishiswe.”
Uthe ngesikhathi bezama ukulusukumela loludaba bathenjiswe induku kwathiwa abathule.
“Sifuna ukwazi ukuthi bakuthathaphi ukuthi bashise impahla yethu iyintsha. Bekungenani ke basitshele ukuthi ngoba ayivumelekile njengokusho kwabo iyofakwa e-storeroom bese ibuyiselwa emuva uma kufika izihlobo zethu?”
Lomlisa uthe kumanje ezinye iziboshwa zifuna ukuvulela ijele icala lokucekelwa phansi kwempahla yazo.
“Lezi izimpahla ezihlale zingena minyaka yonke nangezimpelasonto uma sivakashelwe izihlobo zethu. Sinelungelo lokuthi zingene ngokufaka isicelo kubaphathi bejele nokuyinto abahlale beyivuma. Sifuna ukwazi ukuthi icekelelwani phansi imali yabantu abasinakekelayo njengoba siboshiwe. Uma ngicela i-ketela ekhaya balilethe kodwa lishiswe ngeke besalithenga nangelinye ilanga,” kusho yena.
Okhulume nentatheli ye-Maritzburg Echo ehhovisi lomphathi wejele e-Sevontein uthe abavumelekile ukuphawula kwabezindaba wabe esecela ukuthi kuthintwe ihhovisi lika-Area Commissioner kube yilona elizophendula imibuzo yephephandaba.